Talyaha saldhiga dhexe ee Garowe Aadan Muuse Jaamac oo ka warbixiyay hawl-galo ay ciidanka ammaanka ka sameeyeen magaalada Garowe – Radio Daljir
Garowe, Nov, 07 ? Talyaha saldhiga dhexe ee magaalada Garowe Aadan Muuse Jaamac ayaa Radio Daljir uga warbixiyay hawl-galo lagu sugayo ammaanka caasumada Puntland, kuwaasoo ciidamadu ay ka fulinayeen laamiga magaalada, jidadka xaafadaha, baraha kaan-tarool ee magaalada, iyo meelaha ay bulshada ku badan-tahay.
Talyuhu waxaa uu sheegay inay soo qab-qateen dad badan oo ay siyaabo kale duwan ciidanka ammaanku gacanta ugu soo dhigeen, iyo gawaari badan oo leh bacaha loo yaqaan beer-soolka oo go?aamo ay horay uga soo saareen guddiga nabad-galyada gobolka Nugaal.
Md. Aadan Muuse Jaamac waxaa Daljir u xaqiijiyay in hawl-galkoodu uusan ku sinayn muddo cayiman, isla markaana ciidanka bilaysku ay had iyo goor wadayaan hawl-galada si loo xaqiiyo xaaladda nabad-galyo ee caasumada dawladda Puntland ee Garowe.
Hawl-galada ciidanka bilaysku wadaan ayaa ka dambeeyay kaddib markii ay muddooyinkii ugu dambeeyay Kaantaroolka koonfureed ee magaalada Garowe lagu qab-qabtay dad boqolaal gaaraya, kuwaasoo looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-shabaab.